Museveni hurriedly returns from South Africa as Mumbere is charged with murder, sent to the coolers - Watchdog Uganda
Museveni hurriedly returns from South Africa as Mumbere is charged with murder, sent to the coolers
President Yoweri Museveni asserted himself and ruled out any muchezo as he left orders for the arrest of Mumbere Charles Wesley the king of Rwenzururu after his guards clashes with security officers.
In sending a powerful message, the president who had a two day engagement with his counterpart Jacob Zuma returned to the country after Mumbere had been charged with murder at Jinja chief magistrates court and sent to jail till December 13.
On Tuesday Museveni returned in the country from a two-day working visit and was received by his Vice President, Mr. Edward Kiwanuka Ssekandi, at Entebbe International Airport this afternoon.
Others at the Airport to welcome him included the Minister for Presidency, Ms. Esther Mbayo, the Head of Public Service and Secretary to Cabinet, Mr. John Mitala, the Deputy Chief of the Defence Forces, Lt. Gen. Charles Angina, Assistant Inspector General of Police, Mr. Grace Turyagumanawe and the Deputy Commissioner General of Prisons, Mr. James Mwanje.
In the coming couple of days, Mr Museveni will be reviewing the challenges in Rwenzori that led to the arrest of the Mumbere in a humiliating manner, and engage in political dialogues that would see the Mumbere freed.
It is not clear if the law would strip Mumbere from the Obusinga but Museveni statement released earlier indicated that Obusinga was not a hereditary institution but a political movement and he pointed out that Mumbere literally begged to make him Omusinga, despite objections from some people in Rwenzori region.
PreviousMumbere charged with murder, remanded to Luzira prison
NextHow Makerere got its name